२०७५ असोज २७ शनिबार, एजेन्सी । नेपालमा गाईलाई भगवान्‌को रुपमा पुज्ने परम्परा रहेको छ । गाई नेपालको राष्ट्रिय जनवार पनि हो । तर स्विजरल्यण्डको एक फर्ममा गाईलाई बहानको रुपमा प्रयोग गर्दछ । घोडामा जस्तै गाई माथि यात्रा गरेको देखेर स्विजरल्यण्ड पुगेका भिजिटर्सहरु छक्क पर्ने गर्दछन् । ... बाँकी अंश»
यस्ता व्यक्ति जसले आँखालाई बाहिर निकालेर भित्र सक्छन् छिराउन
२०७५ असोज २७ शनिबार, एजेन्सी । विश्वका हरकोही मानिसमा अलग–अलग विशेषता हुन्छन् । फरक–फरक रुची, आचरण र बानी–ब्यबहारले नै एक मानिस अर्को भन्दा भिन्न देखिने गर्छ । तर, विश्वमा केही यस्ता मानिस पनि हुन्छन्, जसको विशेषता–क्षमता विचित्र किसिमको हुन्छ । ... बाँकी अंश»
ग्रीस अगाडि !
२०७५ असोज २७ शनिबार, एजेन्सी। युरोपेली मुलुक ग्रीसले विश्वकै कामोत्तेजक मुलुकको ‘उपमा’ पाउने गरेको छ । एक अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिएको सर्वेक्षणमा ग्रीसले विश्वकै १० शीर्ष कामोत्तेजक मुलुकको सुचीमा शीर्ष स्थान प्राप्त गरेको हो । ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज २६ शुक्रबार, एजेन्सी । बैङ्गलोरमा एक बादर बजरङ्गबलीनै बने । हनुमानझै संकट मोचन गरेर ३० व्यक्तिको ज्यान जोगाए । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बैङ्गलोरको श्रीरंगापट्टनममा रहेको कावेरी नदी किनारमा एउटा रुख मुनि परिवारले धार्मिक अनुष्ठानको कार्यक्रम आयोजन गरेको थियो । सो धार्मिक अनुष्ठानमा एकै परिवारका ३० सदस्य सहभागि थिए । सो रुखको माथि तिनै संकट मोचक बादर थिए । ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज २६ शुक्रबार, काठमाडौं । यदि तपाइँमा उत्साह छ भने उमेरले केही फरक पार्दैन भन्ने कुराको उदाहरण एक अमेरिकी महिलाले दिएकी छिन् । उनले हालसालै एक गोलीको सहयोगमा १२ फिटको गोहीलाई मारेकी हुन् । ... बाँकी अंश»
अमेरिकालाई पाकिस्तानी सेनाले दिएको थियो लादेनको सूचना
२०७५ असोज २६ शुक्रबार, एजेन्सी । आतंककारी संगठन अलकायदा नेता ओसामा विन लादेनलाई मार्न पाकिस्तानी सरकार र सेनाले अमेरिकी सेनाको मद्दत गरेको अमेरिकी पत्रकार सेमूर हर्षले आफ्नो नयाँ किताब 'द किलिग अफ ओसामा विन लादेन' मा पाकिस्कतानले सीआईएका स्टेशन अफिसर जोनाथन बैंक र पाकिस्तानी सेना बीच लगातार सम्पर्क भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । पाकिस्तानी सेनाका एक प्रमुख अधिकारीले जोनाथन बैंकलाई भेटेर लादेन रहेको ठाँउको जानकारी दिएका थिए । ... बाँकी अंश»
अध्ययन भन्छ- अगरबत्तीको धुँवा यतिसम‍म हानिकारक
२०७५ असोज २५ बिहिबार, काठमाडौं । हिन्दू परम्परामा अगरबत्तीको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि पूजा वा आरधनाको लागि अगरबत्तीको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यद्यपि अगरबत्तीको धुँवा मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने एक विवरणले देखाएको छ । ... बाँकी अंश»
२ अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने जुत्ता !
२०७५ असोज २५ बिहिबार, काठमाडौं । एक जोर जुत्ताको मूल्य कति पर्ला ? १ हजार, ५ हजार वा १० हजार । तर विश्वमा यस्तो जुत्ता पनि बनेको छ, जसको मूल्य कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । ... बाँकी अंश»
यस्ता १० सडक जहाँ कमै चालक जाने आँट गर्दछन्
२०७५ असोज २४ बुधबार, एजेन्सी । यदि तपाई तिब्र गतिमा गाडि हुइकाउने गर्नुहुन्छ भने तपाई कुनै पनि समय दुर्घटनामा पर्न सक्नुहुनेछ । त्यसैले सडकमा तिब्र होइन सुरक्षित यात्रालाई प्रथमिकता दिइनुपर्ने हुन्छ । संसार भरमा यस्ता सडकहरु पनि छन् जहां तिब्र गतिमा गाडि कुदाउन असम्भव हुन्छन् । साथै यी सडकमा ध्यान दिएर गाडि नचलाए चालक घर फर्कने छैनन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज २४ बुधबार, एजेन्सी। कहिलेकाही सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरु विचित्र तस्वीरहरु पोष्ट गर्ने गर्छन्। जुन भाइरल हुने गरेका छन्। इन्टरनेटमा कुनै समय विचित्रका तस्वीरहरु भाइरल भएका थिए। उक्त तस्वीरहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा हजारौ पटक सेयर गरिएको छ। यसलाई इन्टरनेटमा पाइएको विचित्रको तस्वीर नाम दिइएको छ। ... बाँकी अंश»
इन्टरनेटमा कुनै समय भाइरल भएका विचित्रका तस्वीरहरु
२०७५ असोज २४ बुधबार, एजेन्सी । सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरु विचित्र तस्वीरहरु पोष्ट गरेका छन् । जुन भाइरल भएका छन् । ... बाँकी अंश»
पहिलो संसर्गमा महिलाभन्दा पुरुषलाई धेरै आनन्द : अध्ययन
२०७५ असोज २४ बुधबार, एजेन्सी । प्राय मनिसहरु आफ्नो भर्जिनिटीलाई लिएर धेरै सकरात्मक हुन्छन् । अमेरिकनहरु २०-३० बर्ष पहिलाको तुलनामा अहिले आफ्नो भर्जिनिटी गुमाएर ज्यादा राम्रो अनुभव गर्न थालेको अनुसन्धानले देखाएको छ । यो तथ्य एक रिसर्चमा पाइएको हो । ... बाँकी अंश»
प्रेमि-प्रेमिकासँगको सम्बन्धमा शंका छ ? यस्ता काम हानिकारक
२०७५ असोज २३ मंगलबार, एजेन्सी। एक अध्ययनका अनुसार व्यक्तिको भावनामा रूपमा असर पार्ने यौन सम्बन्ध हानिकारक हुने बताइएको छ। भावनात्मक रुपमा कमजोर बनाउने यौन सम्बन्ध महिला र पुरुष दुबैका लागि हानिकारक हुने अध्ययनमा देखिएको हो । ... बाँकी अंश»
युवाको चाहनाः मस्तिको जीवन, नशा र ...
२०७५ असोज २३ मंगलबार, एजेन्सी। आजका युवा स्वतन्त्र जिवन जिउन मन पराउने र कसैको हस्तक्षेप पनि स्विकार्न मन नपराउने देखिएको छ। वेलायतमा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार ७२ प्रतिशत युवा मस्तिले भरिएको जीवन, नशा र सेक्स मन पराउने गर्छन। ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज २२ सोमबार, काठमाडौं । रातको समयमा पुरुषको अन्डरवेयर र मोजा चोरी गर्ने विरालो पक्राउ परेको छ । न्यूजिल्याण्डमा रहेको ब्रिगिट ६ वर्षको विरालोको हो । ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज २२ सोमबार, एजेन्सी । तपाईंले अहिलेसम्म कस्तो–कस्तो ट्वाईलेट देख्नुभएको छ ? तर, पक्कै पनि यस्तो ट्वाईलेट भने सायदै देख्नुभएको होला, जुन गुड्न पनि सक्छ । ... बाँकी अंश»
यस कारण व्यवसायमा माहिर मानिसहरु हुन्छन् 'मुडुले'
२०७५ असोज २० शनिबार, काठमाडौं । गोल्डमेन सेक्सका प्रमुख लायड ब्ल्याकफिन, नेटस्केपका संस्थापक मार्क एन्ड्रीसन, हलिउड चर्चित अभिनेता ब्रुस विलियस, फुबुका संस्थापक एवं सार्क टेकका प्रमुख डायमण्ड जोन। यिनीहरुका अलावा अरुपनि जो मान्छेहरु बढी बाठो र विद्वान जस्ता देखिन्छन् उनीहरुको तालु खुईलिएकै हुन्छ । ... बाँकी अंश»
टाउको काटिएको कुखुरो एक हप्तासम्म ज्यूँदै !
२०७५ असोज २० शनिबार, काठमाडौं । टाउको काटिएको कति समयसम्म बाँच्न सक्छ जनावर ? मुस्किलले ४–५ मिनेट ? तर अचम्म । एउटा कुखुरो एक हप्तासम्म ज्यूँदै रह्यो। ... बाँकी अंश»
ओठको रङ गुलाबी किन हुन्छ ?
२०७५ असोज २० शनिबार, एजेन्सी । कुनै पनि महिलालाई देख्ने वितिक्कै जसरी उनको मुहारमा मानिसको नजर जान्छ, त्यसैगरीका महिलाको ओठमा पनि मानिसको नजर तत्कालै पुग्ने गर्छ । ... बाँकी अंश»
एक बोतल ह्वीस्कीको झण्डै १३ करोड रुपैयाँ !!
२०७५ असोज १९ शुक्रबार, एजेन्सी । स्कटल्याण्डको एडिन्बरामा दुर्लभ खालको सिंगल मल्ट ह्वीस्की (जौको रक्सी) ११ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १२ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा (आजको दरभाउ अनुसार) बिक्री भएको छ। लिलामीमा राखिएको यो रक्सीको मूल्य रक्सीका लागि खर्च गरिएको विश्वकै सबभन्दा महंगो हो। ... बाँकी अंश»